အန္ဒလူးဆီးယား၊ စပိန်မြေပေါ်မှ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း ပထမဆုံး အစ္စလာမ့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် : ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ~ The Ahmadi Post : Myanmar
အန္ဒလူးဆီးယား၊ စပိန်မြေပေါ်မှ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း ပထမဆုံး အစ္စလာမ့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် : ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
စပိန်နိုင်ငံ၊ အန္ဒလူးဆီးယားမြေတွင် အာရပ်ခေတ်အလွန် ပထမဆုံးအစ္စလာမ့်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ပြန်လည် တည်ဆောက်ခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်သာသနာပြု ကရမ် အီလာဟီဇဖရ်
အန္ဒလူးဆီးယားဟု ကျော်ကြားခဲ့သော ယနေ့သိပ္ပံ၏ ကနဦးလမ်းထွင်သူများ ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာ စပိန်မြေ ပေါ်တွင် မိုးဝါးခေါ် အာရပ်မွတ်စလင်မ်လုံး၀ပပျောက်စေရန် တပ်သုတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့အပြီး ယခု အချိန် (၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ) ထိ သာသနာရေးကို စကားပင်မစနိုင်အောင် ပိတ်ပင်တားမြစ်နေ သည့် အခါသမယ။ ၁၆၀၉ ခု ဖီးလစ်နံပါတ် ၃ ဘုရင်က စပိန်မြေမှ မွတ်စလင်မ်များ ထွက်သွားဖို့ Edicts of Expulsion ဥပဒေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းက စပိန်တွင် အစ္စလာမ်သာသနာမှာ လုံး၀ ညှိုးမှိန်နေခဲ့ရပေတော့သည်။
၁၉၄၆ ခုနှစ် စပိန်နိုင်ငံ။ ပြည်တွင်းစစ်မီး အပြီးကာလ။ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကလည်း ချွတ်ခြုံကျ ကပ်ဆိုက်နေသည့်အချိန်။ အစိုးရက ဘာသာသာသနာအားလုံးကို ဖြန့်ချိခြင်း၊ တရားဟောခြင်း၊ ဝတ်ပြုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း စသည်များအားလုံးမျှပိတ်ပင်ထားမြစ်ထားခဲ့သည်။ ကက်သ လစ်ဘာသာဝင်များကိုပင် ယင်းသို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသည့်ကာလ။ အစ္စလာမ် သာသနာပြုမှု စိုးစဉ်းမျှမရှိစေရ။ အစ္စလာမ်သာသနာအား နိုင်ငံတွင်းဖြန့်ချိပါက မုချမလွဲပြည်နှင် ဒဏ်ခံရမည်ပင်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုအသင်းအဖွဲ့ကြီးအား တည်ထောင်သူအရှင်သူမြတ်က မိမိ၏ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များအား အစ္စလာမ်၏ ဝိညာဉ်ရေးရာပြန်လည်စမ်းသစ်ခြင်းအသွင်ဖြင့် သာသနာ ရေးကို လောကီရေးအားလုံးထက် ဦးစားပေးအလေးထားရန်သွန်သင်လမ်းညွှန်ခဲ့ပေသည်။ ရလဒ်မှာကား...
၁၉၄၅ ခုနှစ်။ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုအသင်းကြီး၏ ဒုတိယမြောက် ခလီဖတွလ်မဆီဟ်၊ မီရ်ဇာ ဘရှီးရွတ်ဒ္ဒင်း မာဟ်မူဒ်အဟ်မဒ်(သခင့်အပေါ်သို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ ငြိမ်းချမ်း ခြင်း သက်ဆင်းပါစေ) လက်ထက်။ ခလီဖတွလ်မဆီဟ်သခင်ကြီးက ဥရောပတွင် အစ္စလာမ်သာသနာ ပျံ့နှံ့စေဖို့ စီမံကိန်းချကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် လက်ရွေးစဉ် မစ်ရှင်နရီ၊ သာသနာပြု များကို ရွေးချယ်ခဲ့ သည်။ ထိုအထဲတွင် အန္ဒလူးဆီးယားမြေပေါ် အစ္စလာမ့်သတင်းစကား ပြန်လည်ရောက်ရှိစေဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နှစ်လိုဖွယ်အသုံးချခံကျေးကျွန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကရမ်အီလာဟီ ဇဖရ် ဆိုသူ အဟ်မဒီမစ်ရှင်နရီ၏ အမည်ပါဝင်မလာခဲ့ချေ။
အီလာဟီဇဖရ်။ ၁၉၁၉ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာအတွက် ဘ၀ကိုပုံပေးလှူထားသည့် ဇွဲစိတ်ထက်သန်သော အဟ်မဒီသာသနာပြုတစ်ဦး။ ယခုမူ မိမိခေါင်းဆောင်က ဥရောပသို့ သာသနာ ပြုစေလွှတ်ရန် ရွေးချယ်ထားသောလက်ရွေးစင်စာရင်းတွင် မိမိအမည်ပါမလာ။ စိတ်အတွင်းသို့ ထိုသည့်ဝမ်းနည်းမှုက ချက်ချင်းသိမ်းပိုက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ မိမိ၏ စာသင်ဖော်သင်ဖက်၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် သာသနာပြုများကမူ စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး မိမိမှာမူ အဘယ်ကဲ့သို့ ကြောင့် ထိုသည့် အစ္စလာမ် အားအလုပ်အကျွေးပြုရမည့်အစီအစဉ် အခွင့်ထူးကြီးကို လက်လွှတ်ရပါအံ့နည်း။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာဒီယန်ရှိ အက္ကဆာဗလီဝတ်ကျောင်းတွင် အီလာဟီဇဖရ်တစ်ယောက် မိမိ၏ဖန်ဆင်း ရှင်ထံ ငိုကြွေးမြည်တမ်းကာ တောင်းဆုချွေခဲ့မှု၏ ရလဒ်အဖြစ် ဗလီမှအပြန်လမ်းတွင် လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် သာသနာပြုများက သူ့ကိုလက်ဆွဲနုတ်ဆက်ကာ သတင်းကောင်းပါးခဲ့သည်မှာ "ဟာဇရသ် ခလီဖတွလ်မဆီဟ်က အီလာဟီဇဖရ်ဆာဟိဘ်ကို စပိန်ကိုသွားဖို့ သာသနာပြုအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက် ပြီ။"
၁၉၄၆၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်။ အီလာဟီဇဖရ်၊ အန္ဒလူးဆီးယားမြေသို့ အစ္စလာမ့်အောင်လံတော်စိုက်ထူရန် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ချေချခဲ့ပြီ။ ၁၉၄၆ တွင်မှ စပိန်က ကပ်ဒုက္ခခံနေရသည့်အချိန်၊ ဘာသာသာသနာ များ၊ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ကို အစိုးရက နှိပ်ကွပ်နေသည့်အချိန်။ ထိုကြောင့်လည်း အီလာဟီဇဖရ် တစ်ယောက် မိမိ၏သာသနာပြု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကြီးမားသော ဒုက္ခဆင်းရဲမှန်သမျှကို ခံခဲ့ရသည်။ အစိုးရ၏ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကို အကြိမ်များစွာခံခဲ့ရသည်။ အဆုံးတွင်မူ အီလာဟီဇဖရ်၏ သာသနာ ပြုကြိုးပမ်းမှုများမှာ အစိုးရထိပ်ပိုင်း အထိ သတင်းပျံ့နှံ့သွားပြီး သူ့ကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့ကြ သော်လည်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြင့် ထိုအစီအစဉ်မှာ အထမမြောက်ခဲ့ပေ။
၁၉၄၇ခုနှစ်။ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ခွဲခဲ့အပြီး အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်ဂျမာအသ်အဖွဲ့ ဌာနချုပ် မှာလည်း အိန္ဒိယမှ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ရဗ္ဗဝါမြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ဟာဇရသ် ခလီဖတွလ် မဆီဟ် ဒုတိယမြောက်က အသင်းအဖွဲ့အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့် ဥရောပရောက် အချို့ သောသာသနာပြုများကို မိမိတို့မစ်ရှင်များ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် စပိန်ရောက် အီလာဟီဇဖရ်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
အီလာဟီဇဖရ်က မိမိသခင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်မှာ မိမိအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းကာ စပိန်တွင်ဆက်နေပြီး ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ကြိုးစားရန်ပင်။ အီလာဟီဇဖရ်၏ မေတ္တာ ရပ်ခံမှုကို အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဟာဇရသ်ခလီဖတွလ်မဆီဟ် ဒုတိယ မြောက်က လက်ခံတော်မူခဲ့ပြီး အီလာဟီဇဖရ်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်ရှိနေစဉ် လေ့လာခဲ့ဖူးသော ရေမွှေး ပြုလုပ်သည့်အတတ်ပညာဖြင့် သူ့တစ်ကိုယ်စာ ၀မ်းရေးကို ဖြေရှင်းရင်း အစ္စလာမ်သာသနာပြန့်ပွား ရေးကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန် အကြံပြုတော်မူခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်။ မက်ဒရစ်မြို့။ ရေမွှေးဗန်းကလေးဖြင့် မက်ဒရစ်လမ်းအနှံ့ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေသော အီလာဟီဇဖရ်။ မက်ဒရစ်က လူများက သူ့ကို စပိန်ဘာသာဖြင့် “Perfumera`” (ရေမွှေးသည်) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နာမည်ကြီးစာအုပ် Reader Digest က သူ၏ ရုပ်ပုံဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာ စပိန်မြေသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ရသည် အထိ အစ္စလာမ့်အရေးဆောင်ရွက်သူ “Perfumera`” ခေါ် အီလာဟီဇဖရ်ကို ထိုအချိန်က အရေးတကြီး ကရုစိုက်ရမည့်သူဟု မည်သူမျှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါချေ။
အီလာဟီဇဖရ်က စပိန်နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ ကုန်သွယ်ရေးပွဲတော် (Trade Fairs) များသို့ သွားရောက် ကာ လူအများအား ရေမွှေးရောင်းရင်း အစ္စလာမ်သာသနာဘက်တော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မက်ဒရစ် မြို့၊ အလ်ရက်စ္စထရိုဟူသော နေရာကလေးမှာ အီလာဟီဇဖရ်၏ ၃၄ နှစ်တိုင်တိုင် ပင်တိုင်ရေမွှေး ရောင်းသောနေရာကလေးပါပင်။ ထိုနေရာကလေးမှ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာကလေးမှ အစ္စလာမ်သာသနာအား ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာကလေးမှ လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုအာရုံကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ရေမွှေးရောင်းရင်း တတွတ်တွတ်ပြောဆိုနေတတ်သော "သောင်ဟီးဒ်" ၊ တစ်ဆူ တည်းဝါဒမှာ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂတော်ဖြင့်ပင်။ သူ၏ရေမွှေးလုပ်ငန်းက အမြတ်အစွန်းကလေး များဖြင့် "The Way To Peace" ခေါ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆီသို့ဟု အမည်ပေးထားသော အစ္စလာမ့်ဘက် သို့ ဘိတ်ခေါ်သည့်စာအုပ် (ရေး - ဒုတိယမြောက်ခလီဖတွလ်မဆီဟ်) ကို စပိန်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုဖြန့် ချိပြီ။ သူ၏စာအုပ်ကို ပရိသတ်အမြောက်အမြားက လက်ခံဖတ်ရှုသော်လည်း စပိန်အစိုးရက တရား ဝင်ဖြန့်ချိခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက သူ၏စာအုပ်ကို ပိတ်ပင် ခြင်းမှာ စပိန်၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို လျော့ချပြစ်ရာရောက်သည်ဟု အာဏာပိုင်များကို ဖျောင်းဖျပြောဆို ခဲ့ရာမှ အီလာဟီဇဖရ်၏ ဘာသာပြန်စာအုပ်မှာ တရားဝင်ဖြန့်ချိခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုဖြန့်ချိမှုမှ လူထုပရိတ်သတ်၏ လက်ခံမှု၊ သဘောကျကျေနပ်မှုတို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်မူ "The Teachings of Islam" ခေါ် အစ္စလာမ့်ဒဿနကျမ်း (ရေး - မဆီဟ်နှင့် မဟ်ဒီဘွဲ့ခံ ဟာဇရသ် မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ်အရှင်သူမြတ်၊ အလိုင်စလာမ်) ကို စပိန်ဘာသဖြင့် ထုတ်ဝေဖို့ အခွင့်ထူးရခဲ့ ပြန်သည်။ ထိုစာအုပ်ထုတ်ဝေမှုကိုလည်း အီလာဟီဇဖရ်၏ ရေမွှေးစီးပွားရေးအမြတ် အစွန်းမှပင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကက်သလစ်ချာခ်ျများ၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ထိုစာအုပ်ကို အစိုးရက ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သည်။ အီလာဟီဇဖရ်ကား အစ္စလာမ်အတွက် ဇွဲနပဲကြီးမားသူပင်ဖြစ်သ ဖြင့် ထိုစာအုပ်ဘာသာပြန်ကို လန်ဒန်သို့ပေးပို့ကာ စပိန်ပညာကျော်များထံမှ ထောက်ခံချက်စာ ရင်းကို ရယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် စပိန်အစိုးရ၏ ပိတ်ပင်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် အကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့ ပြီး အဆုံးတွင် စပိန်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်ဖရန်ကိုထံ ထိုစာအုပ်ကို ရောက်အောင်ပေးပို့ခဲ့လေတော့ သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဖရန်ကိုက စာအုပ်ကိုစေ့စပ်စွာဖတ်ရှုခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်တန်ဖိုးထားကြောင်း အလေးအနက် ဖော်ပြကာ စာတစ်စောင် ပြန်ကြားခဲ့ပေရာ အီလာဟီဇဖရ်အဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော် ဖြင့် ထိုစာအုပ်ကို လွတ်လပ်စွာဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့သည်သာမက ရဲဌာနများက စုံစမ်းမေးမြန်းသည့်အခါတိုင်း တွင်လည်း ဖရန်ကို၏စာမှာ အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့လေသည်။
အီလာဟီဇဖရ်က အပတ်စဉ်ဟောပြောပွဲလေးများပြုလုပ်ကာ လူထုပရိသတ်ကို သာသနာပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် ကျောင်းများကပါ သူ့ကို အစ္စလာမ်သာသနာ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောပြောရန် ဆက်သွယ်လာခဲ့ကြသည်။ သူ၏ဘ၀တွင် အစ္စလာမ့်သတင်းစကားကို ပုဂ္ဂလိကစကားဟောပြောမှုများမှလည်းကောင်း၊ စပိန်အသင်းအဖွဲ့များ၏ ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် ပညာပေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားမှုများမှလည်းကောင်း ဖြန့်ချိခဲ့ပေရာ အီလာဟီဇဖရ် သည် စပိန်ဘုရင်မ ဆိုဖီယာနှင့် မင်းသား ဖီလစ်ပီတို့၏ ရှေ့မှောက်၌ပင် အစ္စလာမ့်ပင်မရင်းမြစ် တရားဒေသနာဖြစ်သော "သောင်ဟီးဒ်" ၊ တစ်ဆူရှင်ဝါဒကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဖြန့်ချိခွင့် ရခဲ့လေသည်။
၁၉၈၀ခုနှစ်။ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်။ အဟ်မဒီသာသနာပြုတစ်ဦးဖြစ်သူ အီလာဟီဇဖရ်၏ ကြိုးပမ်းမှုကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က နှစ်မြို့လက်ခံတော်မူပြီ။ ထိုနေ့အခါသမယတွင် အစ္စလာမ် သာသနာ၊ အန္ဒလူးဆီးယားမှ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း ပထမဆုံးသော ဗလီဝတ် ကျောင်းတော်ကို အုတ်မြစ်ချနိုင်ခဲ့လေသည်။ ထိုဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို စပိန်နိုင်ငံ၊ ကော်ဒိုဗာမြို့ တွင် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ တတိယမြောက်ခလီဖတွလ်မဆီဟ်၊ ဟာဇရသ် မီရ်ဇာနာဆီရ်အဟ်မဒ်(ရ.ဟ) မှ လက်မွန်မဆွအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၂၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့။ စပိန်နိုင်ငံ၊ ကော်ဒိုဗာမြို့။ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ စတုတ္ထမြောက်ခေါင်းဆောင်၊ ဟာဇရသ်ခလီဖတွလ်မဆီဟ် မီရ်ဇာသာဟီရ်အဟ်မဒ်(ရ.ဟ) မှ "ဘရှာရသ်" ၊ (သတင်းကောင်း) ဟုအမည်ပေးထားသည့် ဗလီကျောင်းတော်ကို နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သတင်းမီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင် တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
စပိန်နိုင်ငံ၊ ကော်ဒိုဗာပြည်နယ်၊ ပက်ဒရိုအာဘားသ်မှ ဘရှာရသ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်
ဘရှာရသ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်ပွဲတွင် မွတ်စလင်မ်သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာဆလာမ်မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်
(ခေါင်းပေါင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ စတုတ္ထမြောက်ခလီဖတွလ်မဆီဟ် ဟာဇရသ် မီရ်ဇာသာဟီရ်အဟ်မဒ်(ရ.ဟ) ဖြစ်ပြီး သခင်ကြီး၏ လက်ယာတွင်ဘက်ထိုင်နေသူမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ၏ လုံခြုံရေးကောင်စီ သဘာပတိနှင့် ကမ္ဘာ့တရားခုံရုံးတရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာမုဟမ္မဒ် ဇဖရွလ်လာဟ်ခန်ဆာဟိဘ်ဖြစ်သည်။
ရေမွှေးရောင်းသမား သာသနာပြုကြီး အီလာဟီဇဖရ် မှာမူ တာဝန်ပေးချက်အရ ၁၉၈၂ ဒီဇင်ဘာတွင် စပိန်နိုင်ငံ၏အခြားမြို့တစ်ခုဖြစ်သော ဂရာနာဒါးသို့ သာသနာဖြန့်ချိရန်အလို့ငှာ ခရီးနှင်ခဲ့ပါတော့ သည်။
ထိုမြို့တွင် အီလာဟီဇဖရ်မှာ ငါးနှစ်ခန့်နေထိုင်ပြီး အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား အလုပ်အကျွေး ပြုခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ တွင် အီလာဟီဇဖရ်မှာ ပေါ်တူဂီသို့ သာသနာပြုအဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရပြန် သည်။
မော်လာနာ ကရမ် အီလာဟီဇဖရ်မှာ သူ၏အသက်ဇီဝိန်ထက်ပို၍တွယ်တာအပ်သော သာသနာတော်၊ အစ္စလာမ်အတွက် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်မျှ တာဝန်ထမ်းပေးခဲ့အပြီး ၁၉၉၆၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ တွင် သူ၏ အချစ်တော် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးသို့ အခစားဝင်ရောက်ရန် ဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ ပါသည်။
အီလာဟီဇဖရ်မှာကား စပိန်နိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ်သာသနာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် အားလုံးကို စွန့်ကာ ကြိုးစားခဲ့သော အဟ်မဒီယသ်၏ သမိုင်းဝင် သူရဲကောင်းသာသနာပြုတစ်ဦး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏သာသနာပြုမဟာဗျူဟာကို အသင်စာဖတ်သူ သိချင်ပါသလော။ သိလိုပါ၏လော။ အလွန်လျှင် ရိုးစဉ်းလွန်းလှပါ၏။
"ဒီရေမွှေးရဲ့ အနံ့က သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအနံ့က တာရှည်မခံဘူးဗျ။ ထာ၀ရတည် မြဲပြီး တာရှည်ခံတဲ့ အနံ့ကို ကျွန်တော်သိတယ်။ ခင်ဗျားရောသိချင်သလား။ သိချင်ရင်တော့ ဒီကဒ်က လေးကိုယူပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျား။"
အီလာဟီဇဖရ် ရည်ညွှန်းခဲ့သော "ထာ၀ရတည်မြဲပြီး တာရှည်ခံသည့် ရေမွှေးနံ့သာ" မှာ မည်သည်ကို ဆိုလိုပါသနည်း ? အသင်စာရှုသူရော သိပြီးပြီလား ?
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ တတိယမြောက်ခလီဖတွလ်မဆီဟ်၊ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်း စပိန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဗလီဝတ်ကျောင်းကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သူအရှင်သူမြတ်၊ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာနာဆီရ် အဟ်မဒ်(ရ.ဟ)၏ ဥရောပမီဒီယာတစ်ခုမှ မေးမြန်းသည့် "ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သာသနာပြုအစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသလဲ" ဟူသည့် အမေးအား ဖြေကြားထားပုံ ဗွီဒီယိုဖိုင်။
ကျွန်တော်တို့က နှလုံးသားများကိုအနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
Question: How do you conduct your mission in Europe ?
Ans: We try to win the hearts.
ဤဆောင်းပါးဖြင့် အစ္စလာမ့်အလံတော်အား စပိန်မြေ၌ ပြန်လည်စိုက်ထူခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော မော်လာနာ ကရမ်အီလာဟီဇဖရ်ဆာဟိဘ်(ရ.ဟ) အား ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဟူဟူသမျှကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာ ခံထိုက်တော်မူပါသည်။
http://www.islamahmadiyya.es/ahmadia/espana.html အား ဆီလျော်သလို မြန်မာပြန်ပါသည်။
bbc: သတင်း တင်ပြထားမှုမှ ကောက်နုတ်ချက်။ (http://news.bbc.co.uk/2/hi/8711026.stm)
Posted in: စပိန် , ဆောင်းပါး , အစ္စလာမ် , အဟ်မဒီယသ်
အန္ဒလူးဆီးယား၊ စပိန်မြေပေါ်မှ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ အတွင်...